कार्टुनमा भेटिए नवजात शिशु, अभिभावक खोज्दै प्रहरी ! सेयर गरौ « Nepal's number 1 Entertainment news portal
कार्टुनमा भेटिए नवजात शिशु, अभिभावक खोज्दै प्रहरी ! सेयर गरौ
Published : 28 July, 2020 9:58 pm
सोमबार साँझ कपनको आकाशेधारा चौरमा खेल्दै गरेका बच्चाहरूले एउटी नवजात शिशुलाई बेवारिसे अवस्थामा भेटे । नजिकै रहेको केयर चाइल्ड अर्फानेज र बाहिरका समेत बच्चाहरूले खेल्दै गर्दा भेटेको नवजात शिशुको बारेमा अर्फानेजकी सञ्चालिका पुष्पा अधिकारीलाई खबर गरे । कार्टुनको बाकसमा रहेकी ती शिशु देख्दा ४/५ दिनकी जस्ती देखिन्थिन् । बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो ।